မေမြို့မှာရှိတဲ့ သူမ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးကို ရောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ သိင်္ဂီထွန်း –7Day Daily News
မေမြို့မှာရှိတဲ့ သူမ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးကို ရောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ သိင်္ဂီထွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သိင်္ဂီထွန်းကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိတော့ဘဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုအာမခံထားပြီး ပိုက်ဆံချေးပေးခဲ့ပြီး ပြန်မဆပ်ခဲ့တာကြောင့် စိတ်သောကရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကိုလည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် အမြဲရေးသားဝေမျှပေးလျက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်က သိင်္ဂီထွန်းရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မေမြို့မှာရှိတဲ့ သူမ ပိုင်ဆိုင်သော တစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးကို သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ဒီနေ့ မေမြို့ရပ်ကွက်ကြီး၁၀ ဂမုန်းလမ်းစျ/၁၀၄ အိမ်ဌားပြည့်ပါတယ် ဆက်မဌားဘဲ သိန်းတစ်ထောင့်လေးရာနဲ့ရောင်းပါမယ်.ပိုင်ဆိုင်မူအရှူပ်ရှင်းမရှိဂရံသက်တမ်းတော့မိမိတို့အမည်ပေါက်လျောက်ရင်းမှတစ်ပြိုင်တည်းတိုးလို့ရပါတယ်.စိတ်ဝင်စားရင် အပြင်အနေထားရပ်ကွက်အသွားလာအနေထားကြိုက်ရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ..
ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလောက်စျေးနဲ့ရဖို့ မရှိပါ..အဓိကကအရှူပ်ရှင်းမရှိပါ.. ပေ40.60′ပါအိမ်ဌားထားရင်မိသားစုနဲရင် ၄ ယောက်လောက်ဆိုရင်၄သိန်းအနဲဆုံးရပါတယ်ရှင်. စီးပွါးတွက်ဆိုင်ဖွင့်ရင်လဲ ကားရပ်ရလမ်းကျယ်ပြီး အဝင်ထွက်ကောင်းပါတယ်ရှင့်..…ပုံအမှတ်တရအဖြင့်မေမေအလုပ်သွားတဲ့နေရာ အမြဲလိုက်တဲ့ ကျမရဲ့သံယောဇဉ်ခွေးသမီးလေးချစ်လို့ တင်လိုက်ပါသည်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ သိဂႌထြန္းကေတာ့ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ သိမ္းပိုက္ရရွိထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ မရွိေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုသာ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကိုအာမခံထားၿပီး ပိုက္ဆံေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ျပန္မဆပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ ကိုလည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အၿမဲေရးသားေဝမွ်ေပးလ်က္ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။မၾကာေသးခင္က သိဂႌထြန္းရဲ႕ Facebook အေကာင့္တြင္ ပို႔စ္တစ္ခု တင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေမၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သူမ ပိုင္ဆိုင္ေသာ တစ္ထပ္တိုက္အိမ္ေလးကို သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ဖိဳ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိဳက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
” ဒီေန႕ ေမၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ႀကီး၁၀ ဂမုန္းလမ္းစ်/၁၀၄ အိမ္ဌားျပည့္ပါတယ္ ဆက္မဌားဘဲ သိန္းတစ္ေထာင့္ေလးရာနဲ႕ေရာင္းပါမယ္.ပိုင္ဆိုင္မူအရႉပ္ရွင္းမရွိဂရံသက္တမ္းေတာ့မိမိတို႔အမည္ေပါက္ေလ်ာက္ရင္းမွတစ္ၿပိဳင္တည္းတိုးလို႔ရပါတယ္.စိတ္ဝင္စားရင္ အျပင္အေနထားရပ္ကြက္အသြားလာအေနထားႀကိဳက္ရင္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ..
ဒီလိုေနရာမ်ိဳးဒီေလာက္ေစ်းနဲ႕ရဖို႔ မရွိပါ..အဓိကကအရႉပ္ရွင္းမရွိပါ.. ေပ40.60′ပါအိမ္ဌားထားရင္မိသားစုနဲရင္ ၄ ေယာက္ေလာက္ဆိုရင္၄သိန္းအနဲဆုံးရပါတယ္ရွင္. စီးပြါးတြက္ဆိုင္ဖြင့္ရင္လဲ ကားရပ္ရလမ္းက်ယ္ၿပီး အဝင္ထြက္ေကာင္းပါတယ္ရွင့္..…ပုံအမွတ္တရအျဖင့္ေမေမအလုပ္သြားတဲ့ေနရာ အၿမဲလိုက္တဲ့ က်မရဲ႕သံေယာဇဥ္ေခြးသမီးေလးခ်စ္လို႔ တင္လိုက္ပါသည္” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ရွှေမျိုး collection နဲ့ လှူဒါန်းဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ(၁၀)သိန်းတို့ကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး